Ronaldo Oo Soo Dhoweyn Aanu Galabsanin Ka Sugaya Bernabeu
HomeWararka MaantaRonaldo Oo Soo Dhoweyn Aanu Galabsanin Ka Sugaya Bernabeu
Kaddib ganaax laba ciyaarood ah, guul darro isaga loo nixbeeyey iyo xaflad uu qabsaday xilli ay taageereyaasha Real Madrid ka niyad jabsan yihiin guul darradii Atletico Madrid, waxa uu caawa sugayaa in ay ku soo dhoweeyaan garoonka Bernabeu.
Cristiano Ronaldo ayaa garoonka ka baxay kulankiisii u dambeeyey ee garoonka Bernabeu uu ku ciyaaro 15kii January, wakhtigaas oo ay lugta labaad ee Copa del Rey ay isaga hor yimaaddeen Atletico Madrid taas oo ku dhamaatay barbar dhac 2-2 balse ciyaartii hore waxa 1-0 ku soo badisay Atletico, waxaanay ciyaartaasi ku dhamaatay 1-0. Kadib waxa uu kaadh casaan ah qaatay kulankii ku xigay ee Cordoba kadib markii uu feedh iyo laad isugu daray ciyaartoy difaaca uga ciyaara Cordoba. Waxa markaas lagu ganaaxay laba ciyaarood in uu fadhiyo kuwaas oo ahaa Real Sociedad iyo Sevilla.
Nasiib darradiisa waxa uu dib u soo noqday ka hor ciyaartii horyaalka La Liga ee Atletico Madrid, taas oo uu garoonka dhexdiisa goob joog uga ahaa bahdilaad lagu sameeyey kooxdiisa isaga oo daawanaya aanad moodaysay in aanu kubadba ku soo talogelin in uu ciyaaro. Waxa uu ku labisnaa garankiisa ay dhabarka kaga taallo lambar 7, waxa uu xidhnaa kabihiisii uu caanka ku ahaa, waa uu aamusnaa madaxana ruxayay, waxa uu ku guul darraystay in uu sameeyo dhaqdhaqaaq kooxdiisa ka badbaadin kara guul-darrada, waxaanu garoonka ka baxay isagoo madaxiisu foorara, kadib markii 4-0 ay Atletico Madrid ku xasuuqday kooxda boqortooyada.
Isla markii ay ciyaartu dhamaatay ee uu ka baxay garoonka Calderon ee Atletico Madrid waxa uu qaatay gaadhigiisa, waxaana inta uu lebistay uu toos u tegay Hotel uu xaflad ku dhiganayay. Waxa uu bilaabay damaashaad iyo in uu heeso, waxay ahayd xaflad uu u qabsaday maadaama ay ahayd maalintii dhalashadiisa. Waxa kala qayb galay dhawr ciyaartoy oo kooxdiisa ka tirsan iyo marti-sharaf kale oo uu isagu soo casuumay.
Markii xafladdaasi dhamaatay waxa soo baxday saluug ay ciyaartooyada qaar ka muujiyeen xafladdaas uu qabsaday Ronaldo wakhti ay kooxdiisu u fadhido tacsida guul-darrada qadhaadh. Waxa ay taageereyaashuna ku tilmaameen in aanu ahayn nin masuul ah oo intii ay ciyaartu socotayna garoonka iska dhex taagnaa. Waxay ku sifeeyeen in uu iska ilaalinayay in ay wax gaadhaan si uu xafladdiisa u tago isagoo bad qaba, taas darteedna uu garoonka iska dhex taagnaa si fiicanna aanu u ciyaarin.
Intaas oo dhan kadib, waxa caawa fiidka ay Real Madrid garoonkeeda Bernabeu ku martigelin doontaa naadiga Deportivo, waxaana laga sugayaa sida ay kooxda boqortooyadu uga jawaabto guul-darrada qadhaadh ee haleeshay Sabtidii hore.
Ronaldo ayaa isagu dhinciisa sugaya in ay taageereyaashu soo dhaweeyeen, laakiin waxa la sugi doonaa sida ay wax noqdaan.
Man United Oo Ay Newcastle Garoonkooda Ku Qabatay + Natiijooyinka Ciyaarihii Kale ee EPL
Rangers Oo Guul-darro Kala Kulantay Kilmarnock
Hibernian 2-2 Celtic – All Goals & Highlights – SCOTLAND – Premiership